PressReader - Isolezwe: 2017-10-12 - Zingasiza izitshudeni izindlu ezishibhile
Zingasiza izitshudeni izindlu ezishibhile
Isolezwe - 2017-10-12 - IZINDABA - PHILI MJOLI
UKWAKHIWA kwezindlu zokuhlala ezingabizi kakhulu kungaba yisisombululo esingehlisa umthwalo wemali enkulu ekhokhwa ngabafundi, abafunda ezikhungweni zemfundo ephakeme.
Lokhu kushiwo nguMnuz Mbulelo Tshangana owumqondisi jikelele eMnyangweni wezokuHlaliswa koMphakathi kuleli.
UTshangana ubephawula ngezindlela zobuchwepheshe ezingasetshenziswa ukuphucula indlela yokwakhelwa kwabantu izindlu zomxhaso, engqunqqutheleni yomnyango wokuhlaliswa kwabantu yakamuva.
UTshangana uthe inkinga yendawo yokuhlala emba eqolo ivusa ulaka kubafundi. “Udaba olusematheni lwabafundi abakhala ngemali yokufunda ebizayo luhlanganisa nayo indawo yokuhlala. Uma singacwaninga kabanzi sizobona ukuthi emalini yokufunda, imali ebizayo eyokuhlala. Idinga ibhekwe kabanzi le ndaba. Lokho kuholela ekutheni abafundi bagcine sebehlala emijondolo nasezindaweni ezingaphephile,” kusho uTshabalala.
Uthe kusadingeka ukuthi kucwaningwe kabanzi ukuthi lokhu kungenziwa kanjani.
“Esikwaziyo siwumnyango ukuthi u-70% wemali ekhishwa uhulumeni yokwakhwa imixhaso, ithenga izimphahla zokwakha. Ubuchwepheshe kumele busilekelele ngokuthi sizikhiqizele izinto zokwakha. Inkinga esisenayo okwamanje ukuthi nabo lobo buchwepheshe buthengwa kwamanye amazwe.”
UNkk Nompumelelo Sithole kaMasipala weTheku uthe ngokubona kwakhe uhlelo lwezindlu oluthuthukisa umphakathi ngolufana nolwaseCornubia yilona olungaba yisisombululo ezindaweni eziningi.
UTshangana ukuvumile lokho kodwa wathi uhlelo olufana nolwaseCornubia kunzima ukuthi umnyango uluxhase ngoba imali ayanele kanti nemigomo elawula abaxhasi bangaphandle iqinile.
USolwazi uBabatunde Agbola, uSihlalo wezokuHlaliswa koMphakathi, eMangosuthu University of Technology (MUT), uthe into eyenza ukuthi udaba lwezindlu lungalawuleki ukuthi seluphenduke ibhola lomnqakiswano kosopolitiki.